Nwanyị akpụkpọ ụkwụ nke ụmụ nwanyị - maka nsogbu ụkwụ, ndị okenye, njem, ọrụ, na-eje ije ụbọchị dum, zuru ezu, n'obosara ụkwụ, wedge, platform
Nkasi obi na-enye obi ụtọ - otu esi ahọrọ uzo dị mma maka oge ọ bụla?
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na mmepe nke akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị ejiri nlezianya leba anya na ya. Ụdị ndị na-adịghị eme ka ahụ erughị ala n'oge oge sọks nile, dị mma maka ndị inyom meworo agadi na ndị inyom nke ejiji, ndị, maka ahụike, enweghị ike ị nweta oke dị elu.
Akpụkpọ anụ na-atọ ọchị 2018
Na oge na-abịanụ, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị dị mma na-ewu ewu. Ndị na-edepụta aha na ndị mmepụta gburugburu ụwa na-emepe ụdị akpụkpọ ụkwụ , akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ ụkwụ ụkwụ na-adọrọ mmasị, na-enye nkasi obi kachasị mma n'oge sọks. N'otu oge ahụ, a na-akwụkwa anya maka ọdịdị nke ngwaahịa - ejiji ejiji ejiji na-eme ka ihe dị mma, na-egbukepụ egbukepụ, dị iche iche ntinye na ọtụtụ ihe.
Akpụkpọ ụkwụ na-agba ume na ikiri ụkwụ
Ọ bụ ezie na akpụkpọ ụkwụ dị elu bụ isi maka ihe ndị dị mkpa na ihe ndị dị mkpa, ụfọdụ ndị inyom mara mma ahọrọ ngwaahịa ndị a na dịka nhọrọ maka ụbọchị ọ bụla. Dị ka ọ na-achị, ụdịdị ndị a adịghị adabere na ntutu nke dị nro, ma na ụda, n'ikiri ụkwụ, bụ nke nwanyị na-enweghi mmetụta dị elu.
A na-eji akpụkpọ ụkwụ ezumike na-enye obi ụtọ maka ụmụ nwanyị n'ikiri ụkwụ na-abụkarị ihe ndị dị nro na-adịghị edozi ụkwụ ma kwe ka anụ ahụ na-eku ume ọbụna na ihu igwe kachasị mma. Na mgbakwunye, enwere ike ịgbakwunye ya site na ntụpọ, ikiri ụkwụ ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ na ihe ndị ọzọ maka nkasi obi ka ukwuu.
N'oge oyi na nkeji oge, ikiri ụkwụ na-aghọdị ihe na-abaghị uru karịa ụbọchị ndị kpo ọkụ, ebe ọ bụ na ha na-emewanye ka o yie ka ọ ga-adaba ma daa. Ka o sina dị, ụfọdụ ndị inyom, n'oge a na-achọkwa ịhapụ ịrị elu a na-ahụ anya, nye ohere maka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nwere ikiri ụkwụ na traktọ, nke na-enye ihe dị mma n'elu ala ahụ.
Ihe nkasi obi iru ala
Uwunye akpụkpọ ụkwụ nke ụmụ nwanyị n'elu ikpo okwu na-ewu ewu na ụmụ nwanyị n'afọ nile. Dị ka ihe nlereanya na ikiri ụkwụ, ọ ga-enwe ike ile anya na onye nwe ya dị elu karịa ya, ya na ihe osise ya bụ slimmer na slimmer. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị dị n'elu ikpo okwu - nke a bụ akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-ekesa.
N'ógbè ndị nwere ihu igwe oyi, nsụgharị oyi na n'elu ikpo okwu dị iche iche na-achọ, ebe ọ bụ na ha dị ọkụ karịa ụdị ndị ọzọ yiri ya, ma, ọzọ, nye nkasi obi na nkwụsi ike kachasị mma mgbe ị na-eje ije n'elu ebe ndị snow na-ekpuchi. Nke a na-emetụta ngwaahịa ndị dị na traktọ , nke nwere nkwụsi ike zuru oke ma ghara ileghara anya.
Nkume akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na-enye afọ ojuju anaghị adaba uru ha ruo ọtụtụ afọ, na n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-enye mmasị ndị inyom nke ejiji na-eme ihere nke obere obere ha. Ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ n'elu ikpo okwu nke nwanyị toro ogologo kwụsịrị ịhọrọ, ọ na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na ngwaahịa ndị nwere mkpịsị ụkwụ - ha ga-eme ka ụkwụ ahụ mara mma.
Dị ka ndị dọkịta si kwuo, maka ịdị mma na ahụike nke ọkpụkpụ na nkwonkwo, ikpo okwu ekwesịghị ịfefe 4 centimeters. Nkume ụmụ nwanyị na-enye obi ụtọ na-ebuli elu dị otú a adịghị eme ka ibu ahụ dị na nkwonkwo ụkwụ ma ghara ịmịnye ụkwụ, nke dị oké mkpa maka ụmụ agbọghọ ndị na-etinye oge ha n'ogo ha.
Nkasi obi na-adaba
Egwu bụ obe n'etiti ikiri ụkwụ na ikpo okwu. Dị ka nhọrọ abụọ ndị a, ọ na-enye ụmụ nwanyị ezi aka ka ha "bulie elu" n'elu ala, na-enye onyinyo nke ịdị ọcha, romanticism na amara. Dị ka ndị dọkịta na-achọ ịgwọ ọrịa si kwuo, akpụkpọ ụkwụ ndị kachasị mma dị na ntanetị nwere ịrị elu dịka sentimita 5-7, ebe mgbanwe dị elu nwere ike ime ka obi erughị ala n'oge ogologo sọks ma ghara adabara ọrụ ma ọ bụ na-adịgide adịgide.
Nkasi obi maka ụmụ nwanyị
Ọtụtụ ndị inyom na-etinye oge dị ukwuu n'ụkwụ ha na - enwekarị ajụjụ, akpụkpọ ụkwụ ndị kachasị mma? N'eziokwu, ọ gaghị ekwe omume inye azịza a na-enweghị atụ maka ajụjụ a, n'ihi na nkasi obi na nkasi obi kasịnụ maka nwa agbọghọ ọ bụla na-adabere n'ọtụtụ ihe, dịka:
njirimara nke ọdịdị nke ụkwụ, ogologo ya na ịdị elu nke nrịgo;
mgba nke nwanyị mara mma, ọnụnọ nke ibu ibu;
inwe ọrịa na-adịghị ala ala, nsogbu na nkwonkwo na nkwonkwo;
njirimara nke ọchịchị ọrụ - ndụ na-anọkarị, mkpa ọ dị ịnọ na ụkwụ mgbe ọ bụla ma ọ bụ mmegharị oge dị mkpirikpi;
ụzọ ndụ n'ozuzu ya.
Nkume ụkwụ na-enye obi ụtọ n'ụbọchị niile
Karịsịa maka ndị inyom ejiji na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-agagharị oge niile, akpụkpọ ụkwụ ndị dị mma maka ụbọchị ọ bụla - awụsị akpụkpọ ụkwụ na ogwe aka dị ala ma ọ bụ ikiri ụkwụ, moccasins na losers, slip-ons, sneakers na sneakers. N'oge oyi, ụdị ndị a na-edochi akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na obere ọsọ ma ọ bụ obere ikiri ụkwụ, yana akpụkpọ ụkwụ nke ogologo oge na-emeri obi ụmụ nwanyị.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkachamara na-ekwu na akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka ịrụ ọrụ n'ụkwụ bụ ụdị akwa ụkwụ, ihe dịka sentimita 3-4 n'ogologo. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ịmepụta ngwaahịa ma na elu elu, ma na mbadamba ntụpọ na-eduga n'ọdịdị nke spine, ọdịdị nke ụkwụ ụkwụ, varicose veins na ọrịa ndị ọzọ.
Akpụkpọ ụkwụ njem nleta
N'ịga njem, nwanyị ọ bụla mara mma na-eche banyere otu esi etinye n'ime akpụkpọ ụkwụ ya akpụkpọ ụkwụ kachasị mma nke ọ nwere ike ịga ogologo oge. Nhọrọ ndị a kachasị mma maka nzube a:
sneakers si na akpa ume nke na-ewepu mmiri site na ụkwụ. Ụkpọ ụkwụ dị otú ahụ kwesịrị inwe ìhè na-emetụ n'ahụ, nhazi ime ihe kwekọrọ n'ụdị nke ụkwụ, na ihe ndị a pụrụ iche, ma ọ bụ ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ;
sneakers na roba soles, nke na-ekwesịghị ịdị nro na mfe bendable. A gha eji akwa Velcro ma ọ bụ na-agbazi akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ dị mma, Otú ọ dị, nhọrọ nke ikpeazụ nwere ike ịkpata ntakịrị nkasi obi n'ihi ịchụpụsị oghere ndị a na-atụghị anya ya;
ihe mgbochi e ji ezi akpụkpọ anụ mee na nkwado aka na mbara igwe na obere ikiri ụkwụ;
na oge na-ekpo ọkụ, akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka ụmụ nwanyị bụ akpụkpọ ụkwụ asọmpi.
Akpụkpọ ụkwụ na-enye obi ụtọ maka ụmụ nwanyị dị ime
N'ime oge nke nwa na-atụ anya n'ọdịdị nke nne n'ọdịnihu, enwere mgbanwe ndị a na-ahụ anya nke a ghaghị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ ihe eji ejiji na akpụkpọ ụkwụ maka ụbọchị ọ bụla. Ya mere, n'ihi mgbanwe nke hormonal na nhazi nke arọ nke ụmụ nwanyị na-enwe "ọnọdụ dị mma", ụkwụ na-agbakarị ma na-aba ụba. Tụkwasị na nke ahụ, afọ na-eto eto na-eme ka mwepụ nke etiti nnukwu ike, nke nwere ike iduga azụ mgbu na enweghị aha.
Iji zere nsogbu na nsogbu ahụ ike ọzọ maka nne n'ọdịnihu, akpụkpọ ụkwụ ndị nwere ntụsara ahụ n'oge a kwesịrị izute ihe ndị a:
Na ikpo ụkwụ, n'elu ikpo okwu ma ọ bụ na-agbanye ihe dị ka centimetim elu. A na-egbochi elu elu, nakwa dịka nke na-adịchaghị mma;
nnweta ohere ohere n'efu. Ebe ọ bụ na ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ na-enwekarị mgbe ọ bụla na-echere nwa oge, nwa nwanyị n'ọdịnihu kachasị mma maka akpụkpọ ụkwụ dị mma nke nwere ụkwụ zuru ezu, nke e ji nnukwu bootleg, mgbatị gbara gburugburu na enweghị nrụgide na ụkwụ dum;
Dị ka ọ dị, ọnụnọ nke insoles orthopedic.
Nkume ntụsara ahụ maka ọrụ
Ụmụ nwanyị mara mma na-arụ ọrụ na mpaghara ụlọ ọrụ, n'oge ọrụ ha, na-eyiri akpụkpọ ụkwụ ogologo ụbọchị dum. Nkasi ụkwụ na-enye obi ụtọ maka ịrụ ọrụ kwesiri ile nwanyi anya ma mara mma, ma emeghị ka ahụ ghara iru ya ala. Ya mere, umunwanyi ahia bu ihe kacha mma iji choputa akpụkpọ ụkwụ-ụgbọ mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ mechiri emechi na obere ikiri ụkwụ ma ọ bụ ihe dịka sentimita 5-7 n'ogologo.
Nkasi obi agba akpụkpọ ụkwụ
N'ehihie nke ụbọchị kachasị mkpa ná ndụ ha, nwa agbọghọ ọ bụla ji nlezianya chee echiche site na ya oyiyi na obere ihe, na-elekwasị anya karịsịa nhọrọ nke akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe gburugburu ụwa emepewo akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ndị na-eto eto na-eto eto, nke na-adọrọ mmasị na nke mara mma, na-ejiji uwe agbamakwụkwọ na, ọzọ, nwere ike ịnọgide na-enwe nkasi obi na ezi obi onye nwe ya n'ụbọchị.
Ya mere, ọ nwere ike ịbụ akpụkpọ ụkwụ mara mma-akpụkpọ ụkwụ na obere ikiri ụkwụ ma ọ bụ obere osisi, akpụkpọ ụkwụ ballet na ihe ịchọ mma ụmụ nwanyị nke rhinestones ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-egbuke egbuke, akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha ma ọ bụ nke pastel shades. Na mgbakwunye, maka ememe ahụ, ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ ihe ndị dị mfe ma dị mma, na-achọ mma na lace.
Kedu otu esi ahọrọ akpụkpọ ụkwụ dị mma?
Taa na-echekwa ma na-eburu otu akpụkpọ ụkwụ dị iche iche maka ndị inyom mara mma, n'etiti nke ịhọrọ ụdị kwesịrị ekwesị pụrụ isi ike. Nwa nwanyị ọ bụla chọrọ ka akpụkpọ ụkwụ ya, akpụkpọ ụkwụ ya ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ya mara mma, nke dị mma na nke mara mma, ma ha anaghị ete ya ma ghara ime ka ha nwee obi ụtọ n'oge sọks. Ọ bụ ezie na akpụkpọ ụkwụ dị mma na-emepụta site na ndị nrụpụta dị iche iche, iji họrọ nsụgharị ha, ọ dị mkpa iji nlezianya na-achọ ihe kwesịrị ekwesị ma buru n'uche ọtụtụ nuances dị mkpa, dị ka:
ekwesịrị ime ya n'ehihie;
Mgbe o kwesịrị ekwesị, ị ga-eyi ma akpụkpọ ụkwụ abụọ ahụ;
Ọ bara uru ịṅa ntị na mgbanwe nke otu - maka nke a, ọ ga-ehulata;
Ikiri ụkwụ kwesịrị ịdị ala ma kwụsie ike;
N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-enyefe ụdịdị nke ihe ndị sitere n'okike.
Nkasi obi maka ndị agadi
Na ndị agadi, nhọrọ nke akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na-aghọ ezigbo nsogbu, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ọtụtụ ọrịa dị iche iche. A na-erekarị akpụkpọ ụkwụ na-enye obi ụtọ maka nsogbu ụkwụ n'ụlọnga ndị a na-ahụ anya, ebe a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu iji nye nkwado dị mma maka ibuli ụkwụ elu ma na-edebe ụkwụ n'ọnọdụ. Ị nwere ike ịzụta ngwaahịa akpụkpọ ụkwụ na ụlọ nkwakọba ihe nkịtị, Otú ọ dị, ndị agadi kwesịrị inye onyinye maka ngwaahịa ndị dị oké ọnụ ahịa ndị sitere na ihe ndị sitere n'okike na nke a na-ahụkarị.
Nkume na-enye obi ụtọ na ụkwụ
Mkpịsị ụkwụ mara mma ma dị mma maka ụmụ nwanyị n'obere ụkwụ kwesịrị izute ihe ndị a:
nwere ntakịrị elu. A larịị naanị na nke a bụ contraindicated;
nwee mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ square n'obosara. Obere nke dị n'ọdụ dị otú ahụ ga-emerụ ahụike gị;
eji ihe ndị dị nro;
enweghi udi ihu na ntinye aka na mkpịsị aka.
Foto na bọọlụ
Ncha mara mma
Kedu ihe ị ga-eyi uwe ogologo?
Kedu ihe ị ga-eji akwa uwe ogologo n'ala?
Kedu otu esi eji akwa ịchafụ na jaket ala?
Ngwa maka akwa coral
Kedu esi eme akwa uwe?
Kedu ka esi eme buff?
Kedu ihe ị ga-eji jeans na-ebipụta?
Kedu ihe ị ga-eme ikpere ikpere?
Olee otú ejiji ejiji?
Uwe akpụ akpụ nke onye mmepụta
Gịnị mere ego ụgha ji atụ egwu?
Kedu esi esi esi esi nri.
Kedu otu esi eme milkshake?
Igbe dị elu
Oghere ojii na ihu
Mmiri mmiri na-adabere na mmiri maka parquet
Gini mere i nweghi ike idowe okooko osisi na ulo?
Ihe ngosi nke enweghi magnesium n'ime aru nke nwanyi
Peonies mere site na akwukwo azu
Ogwe ihe mgbochi na aka aka
Ndị so "Ụlọ 2" na-enweghị ndozi
Tiffany agba - nke a bụ ihe onyinyo pụtara na Tiffany agba?
Zugzwang - gịnị bụ ya na otu esi esi na ya pụta?
Agbamakwụkwọ ejiji agbamakwụkwọ
Ulo na osisi aka
Mgbụsị akwụkwọ kwachaa Roses na ebe obibi maka oyi
Borodino achịcha bụ ntụziaka
Akwụsị ikpere - ọgwụgwọ ndị mmadụ